Guriga furan ee CACC – Madaarka Mustaqbalka | WSDOT
homeagency projectsOnline open housesGuriga furan ee CACCMadaarka Mustaqbalka
Guriga furan ee CACC – Madaarka Mustaqbalka
Qaybaha soo socdaa waxay ku saabsan yihiin teknooloojiyada soo socota. Teknoolojiyada soo socotaa waxay muujinaysaa kaalmo wanaagsan in laga heli karo oo lagu buuxinayo dalabka oo lagaga jawaabayo saamaynta deegaanka, laakiin teknooloojiyada weli waa la samaynayaa. Gudidu waxay weli wadaa daraasada sida teknooloojoyadu ay gacan uga gaysan karto xalinta mushkiladaha adeega rakaabka, kaargooga, iyo hawlaha guud ee gaadiidka cirka ee ganacsiga ah, laakiin badanaa teknooloojiyadu waa in ay heer gaadhaa inta aanay si wayn u saamaynin gaadiidka cirka.
Teknooloojiyada daruurada wakhtigan, gaar ahaan kuwa duulimaadyada masaafada dhaadheer, waxay ku tiirsanaan doonaan shidaal oo waxay leeyihiin saamayn deegaanka ah mustaqbalka la karo - laakiin isticmaalka shidaalka dayuuradaha ee deegaanka u wanaagsan (Sustainable Aviation Fuels, SAF) iyo teknooloojiyada soo socotaa waxay muujinaysaa in loo socdo yarayn wayn oo waxyeelada deegaaanka ah, yaraynta kharashka iyo kordhinta haboonaanta, gaar ahaan duulimaadyada gaaban. SAF waxay wakhtigan loo isticmalaa gobolka dhaxdiisa laakiin aad ayuu u yar yahay.
Sidee ayuu u eekaanayaa "madaarka mustaqbalku"?
Waa macquul in la helo dayuuradu wasakhayntooda hawadu ay tahay eber oo leh 9-11 kursi oo codkoodu yar yahay in la raaci doono tobonaanka sano ee xiga. Waxaa sidoo kal macquul ah in, la sameeyo "madaarka mustaqbalka" oo la is raaciyo soo saarka tamar aan hawada waxyeelaynin oo loo adeegsan karo gaadiidka dhulka iyo cirka. Waa in la ogaado in wasakhda eberka ahi inay ka dhigan tahay inayna buuxin doonin dalabka qaab wax ku ool ah sanado badan oo soo socda.
Maadaama oo uu jiro shidaal kale iyo hormarin teknooloojiyada dayuuradaha ahi, madaarka mustaqbalku waxa uu yeelan doonaa cod yar iyo wasakhayn hawada ah oo dayuuradajha ah oo ah eber ama ku dhaw. inkasta oo kharasha hagaajinta iyo dayactirka la filanayo inuu hoos u dhaco marka loo eego gaadiidkii hore, kharashka hore ee dhismaha "madaarka mustaqbalka" ee cagaarka ah ayaa marka hor badan.
Fadlan sheeg heerkaaga taageero ee Gobolka oo la dhax geliyo oo lagu doonayo nuxurka teknooloojiyada cagaarka ah ee cusub ee "madaarka mustaqbalka?"
Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan Maxaad sidaa u dareemeysaa?
Dayuurada laydhka ku shaqaysa
Hal fikir oo lagu buuxin karo baahida mustaqbalka ayaa ah in duulimaadyada ganacsi ee mustaqbalka la kordhin doono ee awooda madaarada yaryar ay ku qaabili karaan si loo kala jabiyo duulimaadyada gaaban oo loogu adeegsado dayuurado laydh ah oo codkoodu ka yar yahay oo wasakh hawo aan lahayn. Gobolka Washington waxaa weeye sameeyaha daruuraha laydhka ee hormoodka ah - dayuuradii ugu horeysay ee laydhka ahayd ee rakaabka waxaa la sameeyay duulimaadkdii tijaabada ahaa 2019 iyada oo la isticmaalayo mashiin Everett- ah oo ku shaqeeya magniX, oo dhawr shirkadood oo Washington ah ayaa wada shaqada gaadiidka cirka oo laydh ku shaqeeya.
Iyada oo laga duulayo tijaabada wakhtiga, daruuradaha rakaabka oo aan wasakhaynaynin ayaa bilaabi shaqada ilaa badhtamaha 2020yaadyada ama horaanta 2030yada. Kharashka la xidhiidha ka shaqayntooda iyo dayactirkooda dayuuradaha noocan ah waxa uu ka yaraan doonaa kharashka dayuuradaha caadiga ah, markaa waxay ku baahi doonaan madaaro badan. Laakiin, dayuuradaha laydhka ku shaqeeya waxay gaadhi karaan kaliya masaafado yaryar, taas oo ka dhigan inay u adeegi doonannan deegaano badan. Duulimaadyada masaafda dheer ah, daruuradaha qaada rakaabka waxay u qaadi doonaan madaarada waawayn, halkaas oo ay gayn doonaan meelo faro badan. Sida kor lagu sheegey, kuwa bilaa wasakhda ahi waxay u badan tahay inayna u buuxin doonin dalabka qaab wax ku ool ah sanado badan oo soo socda.
Waa maxay heerka taageerada ee fikirka ka shaqaynta madaarada deegaamada in lagu xidho madaarada waawayn taas oo yaraynaysa wasakhda ama ka dhigtaa eber ee deegaamada u qaybiya gobolka?
Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan
Waa kuwan waxoogaa natiijada ka dhalan karta in la helo madaaro badan oo ka shaqeeya deegaanka oo ku baahsan Gobolka Washington. Fadlan muuji heerkaaga taagero ee natiijada soo socota:
Madaaro badan oo qayb ka ah gobolka ayaan wakhtigan lahayn Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan
Bulshada deegaanka ayaa bixinaysa kharash qayb kamid ah oo dhismaha madaarka ah Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan
Yaraynta saamaynta tayada hawada ee wasakhda hawada marka la eego maanta Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan
Adeega madaarka cusub waxa uu dhiiri gelinayaa korniinka dhaqaale ee deegaanka Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan
Adeega madaarka cusub waxa uu keeni karaa korniin shacabka ah Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan
Isku xidhka madaarada waawayn ee deegaanka meelaha ka baxsan deegaanka Aad aan u taageersanayn Aan taageersanayn Taageersan Aad u taageersan